99 အမည်များအလ္လာဟ်အရှင်မြတ် & မိုဟာမက် (PBUH) | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အစ္စလာမ့် Apps ကပ » 99 အမည်များအလ္လာဟ်အရှင်မြတ် & မိုဟာမက် (PBUH)
99 အမည်များအလ္လာဟ်အရှင်မြတ် & မိုဟာမက် (PBUH) APK ကို
Asmaul Husna (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ 99 အမည်များالله) & Asmaul Nabi လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မွတ်စ်လင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် (Asma ul Husna) & မိုဟာမက် (SAW) ၏ 99 လှပအမည်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရကြကုန်အံ့တစ်ခုရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တာပါတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အစ္စလာမ့် App ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်, အာရနှင့်ဒူဘာသာစကားတွေနဲ့ 99 အမည်များရှိပါတယ်။ ဒါဟာဘယ်နေရာမှာမဆိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၌သင်တို့၏ phone.Importance ကနေအချိန်မရွေးအလ္လာဟ်အရှင်မြတ် & တမန်တော်မြတ်ရဲ့ 99 အမည်များဤ 99 အမည်များကိုထပ်ခါသို့မဟုတ်အလွတ်ကျက်ရန်ယခု ပို. လွယ်ကူသည်:
အဆိုပါတောငျးအမည်များကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ဖြစ်ကြသည်။ (7: 180)
မိမိအအလှဆုံးအမည်များဖြစ်ကြသည်။ (17: 110)
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်! ဘုရားသခင့သို့သော်ကိုယ်တော်မပါရှိပါသည်။ မိမိအအလှဆုံးအမည်များဖြစ်ကြသည်။ (20: 8)
ဇာတ်ကြောင်းပြောဘူ Huraira (RA): Bukhari, စာအုပ် 9, အတှဲ 93, Hadith 489
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့တမန်တော်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်အသက်ကိုးဆယ်ကိုးအမည်များ, တဦးတည်းတတရာလျော့နည်းရှိပါတယ် "ဟုပြောသည်; နှင့်နှလုံးအားဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုမှတ်မိသူမူကားပရဒိသုဝင်ပါလိမ့်မယ်။ "နှလုံးကသိရန်ကိုဆိုလိုပါသည်တစ်ခုခုရေတွက်ရန်။
ဇာတ်ကြောင်းပြောဘူ Huraira: Bukhari, စာအုပ် 3, အတှဲ 50 နှင့် Hadith 894
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့တမန်တော် "အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်တဦးတည်း-တရာအနုတ်တဦးတည်းဆိုလိုသည်မှာအသက်ကိုးဆယ်ကိုးအမည်များရှိပြီး, အကြင်သူသည်ထိုသူတို့သိတယ်ပရဒိသုကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ " ဟုပြောသည်
ကျမ်းမြတ်ကိုရ်အာန်ကနေအလ္လာဟ်အရှင်မြတ် & သူ့တမန်တော်မြတ်၏ 99 အမည်များ၏•လှပရွတ်ဆိုထားသော & Animation ရဲ့
•အင်္ဂလိပ် & ဒူအတွက်သန့်ရှင်းသောအမည်များများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများ & ဆိုလို
•ဒစ်ဂျစ်တယ် Tasbeeh ကောင်တာအမည်များထပ်များအတွက်
• Play စ / အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့အမည်များပေး Audio များအတွက် option ကို Pause နဲ့ပြန်လည်စတင်ရန်
•သူတို့လိုချင်တဲ့အခါတိုင်းအသုံးပြုသူအမည်များ (ထပ်) Tasbhi အကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပျနိုငျ
ဒါဟာသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက် & ratings ရှိသည်ဖို့တစ်ဦးအပျြောအပါးပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးပေါ်ဟာ android ဗားရှင်းနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်လုပ်
99 အမည်များအလ္လာဟ်အရှင်မြတ် & မိုဟာမက် SAW
12.47 ကို MB